Ego Reallọ Akụ Investlọ Azụmaahịa | Global Real Estate Fund - AKW .KWỌ
721 Ndị ọchụnta ego
Achọgharịrị lọ AlaSM
Otu US Commercial Real Estate Investment Fund (Ego nke US)
Maka ndị na-etinye ego na ụwa
Gụọ na ...
Nabata ndị na-abụghị ndị US INPESTS INYERE MAY 1st
Tinye ego Ugbu a
Ihe omuma anyi banyere ulo oru Warren Buffet,
"Oge kachasị amasị anyị bụ oge ebighebi".
Anyị na-azụta azụmaahịa ụlọ ma jide… ruo mgbe ebighị ebi! All mgbazinye ego ga-reinvested ịzụta ihe azụmahịa Njirimara, na-eto eto uru nke ego itinye ego ụlọ ekwu okwu.
Anyị na-azụta azụmaahịa ụlọ ma jide… ruo mgbe ebighị ebi! A ga-etinye ego ego mgbazinye ego niile iji zụta azụmaahịa ndị ọzọ, na-abawanye uru nke ego ahụ.
Kedu ka REICG Commerce Real Estate si dị iche?
Imirikiti ego itinye ego na ụlọ na-ekesa nloghachi n'otu ụzọ abụọ, ma ọ bụ site na nkesa / nkesa ma ọ bụ site na mmiri mmiri nke ihe onwunwe.
REICG na-etinye ego ego nke ala anyị na-enweta na ịzụtakwu ihe. Usoro itinye ego na ego a na - abawanye ego ego nke Fund, na - enye ohere ka Ego ahụ zụtawanye ihe ndị ọzọ, na-eto pọtụfoliyo ahụ nke ọma. REICG bu ihe eji eme ihe ogologo oge nke na - etolite ego nke ndi na - etinye ego site na ekele nke uru ego a bara.
Imirikiti ntinye ego nke ala na ụlọ na-adị ogologo oge na ọdịdị na oke ego, mana REICG ewepụtala ụgbọ mmiri ka ndị na-etinye ego na-ewepụta mbak na usoro iheomume ha.
Tinye ego na Real Estate dị ka ezinụlọ ndị kacha baa ọgaranya n'ụwa.
Ihe 1% kacha elu emeela akụ na ụba ha na ezigbo ụlọ ahịa maka ọgbọ. Ha enweela ohere zuru ezu ịzụta ọkwa itinye ego, ụlọ ahịa, ma jigide akụ ndị a ruo ogologo oge.
Ha na-etinye ego n’ime ego mgbazinye ego n’ime ezigbo ala na ụlọ wee bawanye ụba.
Mụta otu o si arụ ọrụ
Ihe 1% kacha elu emeela akụ na ụba ha na ezigbo ụlọ ahịa maka ọgbọ. Ha enweela ohere iji zụta ọkwa itinye ego, azụmaahịa ụlọ, ma jigide akụ ndị a ogologo oge.
970 Ezumike St.
Mon-Fraị: elekere 9:00 - 5:00 pm EDT
Onye ọ bụla nwere ike ịghọ onye na-etinye ego na azụmaahịa mba ụwa, na-enweghị nnukwu itinye ego ma ọ bụ ahụmịhe gara aga.
© 2021 REI Isi Obodo, LLC | Ikike niile echekwabara.
REI Isi Obodo Management (REICM) na-arụ ọrụ na weebụsaịtị na reicapitalgrowth.com ("Site"). Site n'iji saịtị ahụ, ị ​​nabatara Usoro Ọrụ na Nzuzo Anyị. A GHARA NA-AHND AKWTERKWỌ NT INRTER AKPTERR NO NA-ENWEGH NO ỌR OB Ọ B OR ỌBMR OR MA Ọ B COM IME ụdị ọ bụla. ND THE NA-AH Q AKW SECKWỌ AKW SECKWỌ AH.. ANB BERCH Ọ BCH
Nchedo niile metụtara ihe egwu ma nwee ike ibute ele mmadụ anya n'ihu ma ọ bụ mkpofu. Anyị, na-ezo aka na REICG na ndị mmekọ niile REICG, anaghị enye ndụmọdụ ụtụ isi ma ọ bụ ndụmọdụ ntinye ego. Onweghị nsonaazụ ndị akọwapụtara n'ime ebe a ma ọ bụ ebe ọ bụla na Saịtị a doro anya ma ọ bụ na ha ekweghị nkwa na ọ ga-eweta ụdị itinye ego ma ọ bụ ụtụ isi ọ bụla. Ndị chọrọ ịbụ ndị na-achụ ego kwesịrị iso ndị ndụmọdụ ụtụ isi nke ha gbasara ụtụ isi na-adabere n'ọnọdụ ha. Ma REICM ma ọ bụ ndị mmekọ ọ bụla nwere ibu ọrụ maka nsonaazụ ụtụ ma ọ bụ nsonaazụ itinye ego na atụmatụ nke onye ọ bụla na-etinye ego na-etinye ego na onyinye nke REICM na-akwado. Ozi dị na weebụsaịtị a abụghị atụmatụ ịre ma ọ bụ ịrịọ mmasị na nchekwa ọ bụla. Anyị anaghị arịọ arịrịọ belụsọ site na akwụkwọ ndị ọrụ gọọmentị na-enye anyị dị ka akwụkwọ ndekọ aha nzuzo ma ọ bụ atụmanya. Enwere ike ịnweta akwụkwọ onyinye ndị a naanị na ọnụego nnabata anyị "INVEST UGBU A".
Biko kekọrịta ọnọdụ gị ka ị gaa n’ihu.
Lelee nke anyị enyemaka ndu n'ihi na ihe Ama.